I-Old School Lodge Master Room - I-Airbnb
I-Old School Lodge Master Room
Iuka, Kansas, i-United States
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Caitlin
U-Caitlin unokuphawula okungu-25 kwezinye izindawo.
U-Caitlin uthole izilinganiso zezinkanyezi ezingu-5 ezivela ku-91% wezivakashi zakamuva.
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Caitlin izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Woza ujabulele ukuhlala okunethezekile eSikoleni seBanga le-Iuka esalungiswa kabusha sango-1955! Isakhiwo esingamamitha-skwele angama-38,500 sinobuhle obuningi nomlando oyingqayizivele. Isikole sebanga lokuqala sinamagumbi amakilasi angu-4, igumbi lomculo, indawo yokuzivocavoca enesiteji, nendawo yokudlela. Ngenkathi abanikazi, u-Luke & Caitlin Laha, bethenga isikole ngo-2018 babefuna ukugcina isici sesikole kuyilapho behlanganisa umuzwa "wokuzingela". Indawo yokulala ifinyeleleka ngokuphelele ngokukhubazeka! Kunezindlu zangasese zomphakathi esikoleni, eyowesilisa neyodwa yabesifazane.
Amakamelo amakilasi angu-4 ahlukaniswe aba ngamakamelo okulala angu-8 anemibhede yezindlovukazi engu-2 lilinye ($80 ubusuku/ikamelo ngalinye). Igumbi lomculo manje seliyi-Master Room ($100 night) elihlanganisa umbhede olingana nenkosi, indawo yokucima ukoma, ihhovisi lomuntu siqu, kanye nomtapo wolwazi. Isivakashi sizohlinzekwa ngamalineni ombhede namathawula ngesikhathi sokuhlala kwaso, kanye nebhulakufesi njalo ekuseni ezihlala kuzo. Awufuni ukuphuthelwa ukuhlala kulesi sikole esiyingqayizivele, esinomusa!
I-Iuka iwumphakathi onokuthula onabantu abangu-185 nokuziqhenya okuningi okutholakala kumakhilomitha angu-5 enyakatho yePratt, Kansas. I-Iuka inemigwaqo egandayiwe ukuze isivakashi sijabulele ukuhambahamba okumnandi kwakusihlwa edolobheni.
U-Luke & Caitlin bazotholakala ukuze babingelele isivakashi lapho sifika. Bazoba sesikoleni ngoMsombuluko-ngoMgqibelo ngesikhathi samahora avamile e-Cafe' & Coffee Shop, kodwa abatholi ucingo kuphela uma kuphakama inkinga.